Munaafaqadda iyo Necaybka Ka Buuxa Taliska Jibouti Ee Ay Somaliland U Qabaan wayna
Saturday March 03, 2018 - 08:57:16 in Maqaallo by Reporter Burco
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa bartiisa Twitterka wuxuu toban saacadood ka hor soo dhigay farriin ah
"Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday heshiiskii maalin ka hor ay saxeexeen Somaliland iyo Ethiopia ee ku saabsana dekedda berbera".
Markaad hoos u raad raacdo waxaa qoraalka jeclaaday "Liked" raxan ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaa ku soo baxaya maxsuul ah, in ay tahay hawl laga soo wada shaqeeyey oo ay ka midaysanyahiin Jibouti iyo Muqdisho oo Somaliland lidi ku ah.
Cadawga 1-aad ee Somaliland mandaqadda beriga Afrika ku leedahay waa Jibouti, sidaasi ayaan u sheegaya shacabka reer Somaliland. Nidaamka ninka tunka weyn ee buurani xukumo ee Jibouti ka taliya wuxuu geed dheer iyo ku gaabanba ugu jira inay Somaliland fashilanto, mana aha mid uu haddeer bilaabay.
Sannadkii 2000 shirkii uu Taliska Geella Batal ugu qabtay Carta Soomaaliya, ma ahayn jecayl uu u qabay Soomaaliya, ee waxay ahayd ku xumayn inuu meesha ka saaro qarran la yidhaahdo Somaliland oo mandaqadda kula jaar noqda.
Siyaasiyiinta Somaliland muxaafid iyo mucaaridba waxaan u sheegaya, yeynaan Jibouti iyo taliska ka taliya waxba isku dhadhajin, waa munaafaqiin laba wajiilayaal ah, oo dhooshana inooga qoslaya, hoostana qaranimadeena ka burburinaya.
Madaxweyne Muuse Biixi waxaan weydiinaya nidaamka noocaas ahi siduu inoo dhex dhexaadin kara Soomaaliya.
Somaliand waa inay adkayso xidhiidhka ay la leedahay dalka Ethiopia.